Inta badan cajiib qalcadahaba ee Germany | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Inta badan cajiib qalcadahaba ee Germany
Germany si dabiici ah waa wadan qurux badan. Laakiin marka aad bilaaban ka fikirka ku saabsan Daar wayn, aad u jeclaan doonaa oo waxa uu xitaa more. Oo dadkii oo dhammu ah, waayo, Germany waa, sida laga soo xigtay qaar badan oo, caasimada qalcaddii ee dunida dacaladeeda ah.
Waxaa jira ciidan dhan iyo Daar wayn cajiib ah in Germany aad u baahan tahay in ay booqdaan. In this article, waxaan diirada doonaa oo kaliya kuwa ugu quruxda badan iyaga ka mid ah. Waxa kale oo aanu ku siin doonaa info ku saabsan sida aad awoodid iyaga gaaraan tareen, si ay u ku farxaan dhammaan kuwii ku caashaqi jiray tareenka!
Schloss Neuschwanstein - Castle Most cajiib ah ee Germany
Dad badan oo u ogaado sida mid ka mid ah Daar wayn ugu quruxda badan dunida oo dhan, ma ahan oo keliya Germany. Haddii aan in, waxaa dhab ahaan caan ku tahay isagoo waxyoonay ee Disney Castle. Marka aad eegno this Sheeko cirfiid qalcaddii, waxaad ogaatay sababta. Waxaa hubaal ah inaad fahmi karto sababta ay ka mid Daar wayn ugu cajiib ah in Germany!
Schloss Neuschwanstein waa shaki la'aan haybad, laakiin sidee halkaas oo aad ka heli? Waxa ugu fiican oo ku saabsan Germany waa in meelaha ugu xirmaan via tareenka. Tareen isteeshanka ugu dhow in qalcaddii waa in Fussen. Si kastaba ha ahaatee, aad gaari kartid saldhiga in ka Munich ama wax kasta oo magaalooyin kale oo waaweyn Jarmal.
Hohenzollern - The ugu badan ee sixirku Castle ee Germany
qalcaddii Hohenzollern ma aha oo kaliya ka mid ah Daar wayn ugu cajiib ah in Germany - waa ugu sixir mid ka mid ah. Waxaad ka heli kartaa in ka gobolka of Baden-Wurttemberg, dhow Stuttgart. gobolka Baden-Wurttemberg waa ugu underrated mid ka mid ah Germany, laakiin marka aad aragto qalcaddii this, aad ku xidhan tahay in aad bedesho opinion!
Si kastaba ha ahaatee, helitaanka qalcaddii noqon kartaa dhibaato, inkastoo gebi ahaanba ku kacaya waxa. Habka ugu fiican ee waa in tareen qaado ka Stuttgart in Hechingen. Markaas waxaad u baahan tahay in ay qaataan a tug dheer iyo fuulaan buuraha sare si ay u gaaraan qalcaddii. Anigu waxaan uun dhalmada! Waxaad qaadan kartaa basas ama taxi ka Hechingen sida qalcaddii waa arrin u dhow magaalada.
Hohenzollern Sigmaringen - Castle Grandest ee Germany
Waxaan aragnaa is-hoosaysiiya, Liiska no oo ka mid ah iyo Daar wayn ugu cajiib ah in Germany noqon kartaa dhamaystiran oo aan sheegin Hohenzollern Sigmaringen. Waa qalcaddii ugu ballaaran iyo grandest aad waligaa jiifay doonaa indhahaaga on! Oo haddii aan ku filan, waxa ay sidoo kale ka wada breathtaking.
Sidaa darteed Hohenzollern-Sigmaringen waa in Baden-Wurttemberg; sidaas darteed waa gebi ahaanba la yaab sababta ay dadka ka ammaanaya gobolka sida ugu mid qurux badan in Germany!
Sida ay u safreen - tan waxaad ka heli kartaa qalcaddii magaalada, waana cudur si fudud loo heli karo tareen. Habka ugu fiican ee waa in tareenka ka Ulm ama Stuttgart qaado ka dibna ku socon qalcaddii.
Frankfurt inay Tareenadu Ulm
Stuttgart in Tareenadu Ulm
Leipzig in Tareenadu Ulm
Nuremberg in Tareenadu Ulm
qalcaddii oo keliya u taagan buurta yar, iyo waxa ay si dhab ah u egtahay cajiib ah. Si kastaba ha ahaatee, ma ahan sidaas cidlo marka aad tixgeliyaan in weli uu deggan yahay! Haa, Eltz ah qoyska ayaa lagu qabtay qalcaddii for 33 ka ab!
Marka ay timaado in ay jiraan helitaanka, waxaad yeelan doontaa in ay socdaan ama aad u hesho a baska ama taxi ka Hatzenport. Si kastaba ha ahaatee, waxa gebi ahaanba suurto gal ah si aad u hesho in magaalada yar oo tareen ka Koblenz - magaalada dhow waaweyn.
Frankfurt inay Hatzenport Tareenadu
Bonn in Tareenadu Hatzenport
Cologne si Tareenadu Hatzenport
Dusseldorf in Tareenadu Hatzenport
Sidaas daraaddeed waxaa aad u leedahay, liis dhamaystiran oo ku Daar wayn ugu cajiib ah in Germany. Waxaan rajaynaynaa in aad soo booqato doonaa ugu yaraan mid ka mid ah oo ku saabsan safarkaaga soo socda! Haddii aad rabto in aad ogaato wax dheeraad ah oo ku saabsan safar tareen inay qalcado kuwan, si xor ah u nala soo xiriir goor kasta.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/most-spectacular-castles-germany/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / in ay / fr ama / PL iyo luuqado badan.
#Jarmalka Qalcado europetravel trainjourney Tranride talooyin tareenka safarka travelgermany